BBVA sy BancaMarch dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Apple Pay | Avy amin'ny mac aho
BBVA sy BancaMarch dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Apple Pay
Y roa hafa izay ampiana amin'ny "Coming Soon" an'ny Apple Pay, BBVA ary BancaMarch Izy ireo dia efa miseho ao amin'ny sehatry ny tranokala Apple ho azo alaina vetivety. Ny hazakazaka manampy Apple Pay dia efa ela teo amin'ny banky eto amin'ny firenentsika, saingy tsy dia ela akory izay no nisy ny fahantrana.
Miova izao ny toe-javatra ary afaka mahita ny hetsika amin'ity lalana ity ianao, Banc Sabadell, Bankia, BancaMarch ary farany BBVA efa hiditra amin'ny Apple Pay. Ny mpanjifan'ny BBVA dia nanam-paharetana ary fantatro mihoatra ny iray izay tena hiandry ny famoahana azy hahafahany mampiasa azy, koa "tongasoa eto amin'ny klioba."
Tsy misy daty ofisialy
Ny lesoka "Ho avy tsy ho ela" dia izay tsy misy daty manokana hanombohana amin'ny fomba ofisialy ary izany no hitarika antsika hijery isaky ny roa isaky ny telo ao amin'ny tranokala Apple na ireo tambajotra sosialy izay iasan'ny bankintsika, hahafantarantsika izay andro ahafahantsika misoratra anarana ny carte de crédit sy debit antsika handoavana an'i Apple Pay.
Amin'izao fotoana izao dia izao no sarin'i ny banky sy ny orinasa misy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Apple Pay:
Manantena aho fa tsy haharitra ela ny fanombohana an'ity serivisy fandoavam-bola azo antoka sy haingana ary tena mahomby ity dia ny Apple Pay. Etsy ankilany, ny sisa amin'ny banky dia azo antoka fa hanampy tsikelikely amin'ny lisitry ny misy, saingy misy tranga toa ny ING, izay banky an-tserasera tanteraka ary mora kokoa ny miditra amin'ity tontolo ity izay tsy milaza na inona na inona momba ny fahatongavan'ny serivisy. Manantena aho fa hitohy ny fifampiraharahana ary misy orinasa maro hafa hanatevin-daharana ny Apple Pay amin'ny andro ho avy, toa izao dia manomboka any Espana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » BBVA sy BancaMarch dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Apple Pay
Sina eo ambony latabatra tamin'ny fivoriana Trump-Tim Cook
Carbon Copy Cloner manavao ny sary APFS